I-Genius kunye noBulumko - i-Geofumed
- Ngubani otshintsha amatsha amatsha kubantu abadala? - ndandimemeza.
Inkosazana ebhaleni yayinika isibani esidala sika-Aladdin kumntu omdala.
Ibali liyazi kakuhle ukuba akukho mntu ukhumbuza umbala obomvu ojikelezayo ekupheleni kwesibane, kunye nesenzo somsebenzi ukubonelela ngezicelo zenkqubela kunoma ubani ophethe isixhobo kwaye ngaphandle kwenzalo. Ukuphazamiseka kwenhlanhla kwakhokelela u-Aladdin ukuba abe nezinto azifunayo, ecinga njengezinto ezimele zempumelelo: imali, ukutya, intombazana, ukukwazi ukuphuma kwiingxaki ezinzima kunye ne-cliché yokuvuya ngonaphakade.
Ngokwenza oko, ulonwabo yisigqibo (kungekho imeko) engabandakanyekanga kwizinto uAliddin azifumene. Nangona ukonwaba yimeko - kwaye ixhaphake kakhulu kwihlabathi- kwiimeko ezininzi ngenxa yokungabikho iimfuno zoluhlu olufanayo.
Ngoko ke siyazi ukuba akukho nongqondo yeso sibane, kodwa ezininzi iiAladines ezinezandla ezandleni zazo zifuna ithuba. Ngaphandle kwalabo abachitha imali yabo kwiikitikiti zeLotto, into esinayo ngayo isimo sengqondo ngokubhekiselele kubomi, oko, ukuxhaswa ngezipho zemvelo kunye nezakhono ezifumeneyo, kusenza siphumelele.
Oku kudla ngokuba yi-wit, efana nombono kwaye ngokukrakra ifana negama eliyingqiqo, nangona ayinanto enxulumene nale miqoqo yamathambo okanye izidalwa ze15 isahluko se-Qur'an. Ubulumko bunxulumene nezakhono ezazisetyenziswe ngu-Aladdin ukuba akazange ahlangabezane nenhlakanipho. Phakathi kwezi sinokuthi:
URichard Stallman Wayenenkathazo xa ekhupha impendulo, ethi into efanelekileyo kubafundi baseHarvard kwakufuneka benze unyaka wokuqala baze bathathe umhlala-phantsi ukuze benze amabhishini abo, inani liye labonisa ukuba amandla abo avunyelwe. Kodwa uStallman wayengathethi ukuba izifundo zesiyunivesithi azidingekile, mhlawumbi injongo yakhe kukubonisa ukuba eli lizwe lifuna ukuba abantu abancedisayo bangabonakali emva kwedeski kwihlabathi elinemihla yalo ngaphandle kokuba iingcamango zenziwe ngaphandle kwayo. eziqhelekileyo
Ngokuqhelekileyo iinjongo zethu ukutshintsha indlela esenza ngayo izinto zidibene nabacebisi abaneminyaka engamashumi amabini anesihlanu benze izinto ngendlela efanayo. Ukuvalelwa kumxholo omncinci, bacinga ukuba iingcamango zezizukulwana ezitsha ziphosa, zikhohlwa ukuba igalelo elithe gqolo livela kubantu abangekho iingcali kulo mbandela, obanikezela ukungahambi kakuhle.
Sivame ukulibala ukuba umvuzo wethu wesibili yinto esiyifumanayo kwimisebenzi yethu yangoku, ngoko ke sinqaba ukuhlawulisa njengoko kufanelekile. Ngamanye amaxesha kufuneka ubekezele umphathi onzima, yingakho isikhundla sakho, ukuzinza okanye isikhungo kuza kumela kamva kwikharityhulam yethu.
Ulwazi oluqokelelwayo lokukhulisa umntwana, ukukhula ishishini lentsapho, ukukhonza abanye ebandleni okanye ukuzithandela kuletha iziphumo kungekudala okanye kamva. Ukuqatshelwa okanye kungekhona ngabo bonke njengendlela yokufanelana nempumelelo, amava azuze kakuhle yinto ebangela ukuba sisinde.
Uqeqesho Akukho mbono iza kuphumelela ngaphandle kokugxininiswa kwenkqubo yokugqiba izinto eziqalayo. Kubalulekile ukulandela izikhala ezilandelwa ngabanye njengemigqithiselo, kodwa ngaphambi kokuhlukahluka kweemeko kuya kufuneka ukuba uzame ngokukhawuleza enye, enye ize iphinde isisombululo seengxaki.
Ukucinga ukuba u-Aladdin wayenakuhamba phambili ngesibane esasingenayo ingqondo ngaphakathi, kubonakala kuwumsebenzi onzima. Kwaye ngokuchanekileyo ngenxa yoko, ubuchule bufuna umgudu omkhulu ukwenza umzobo we-napkin ephepheni; kodwa ezininzi zezinto esizisebenzisayo ziyimveliso yombuzo wangaphakathi womntu ocinga ngeendlela ezintsha zokwenza izinto nokuziphatha ukuze athole iziphumo zokugqibela.
Ekugqibeleni, kungakhathaliseki ukuba sisisityebi esinalo okanye amandla ethu engqondo, isimo sengqondo esifanelekileyo ebomini siyadingeka. Akufuneki ukuba sifihle kwibhubhoratri ukuze sifumane i-bulb entsha okanye izicelo ezisebenzayo kwiingcamango zikaTesla; kodwa kuyimfuneko ukwenza ukucinga kuphume ukufumana iindlela ezintsha zokuhamba phambili, ukugcina ubudlelwane obuhle kunye nezihlobo zethu kunye nathi.
Yintoni oyenzayo ingaphuculiswa kunye nobuchule obuninzi?
Post edlulileyo«Edlulileyo Inkambo yezolimo kunye nesitishi esipheleleyo
Post Next Iikhompyutri zekhosi ye-TopographyOkulandelayo "
Enye Impendulo ku "Genius and Intelligence"
Abacebisi bokucwangcisa bexesha elide abangenayo eyabo, kulula kakhulu kuthi ukuba sixhase iziko ukukhulisa umbono kunye nenjongo, kwaye eyethu?
Yingakho sonke sihlala siphelo ngenxa yokuba asiyazi apho siya khona ... amadoda omgaqo ... kuba asizange sifeze oko siqalisile kuba phantse sisoloko sithatha inqamulelo kungekhona kwiplani kodwa elula ...
Ndiyaphakamisa namhlanje ndiya kwenza inkcazo kwiLizwi kwaye ndiya kwakha ikusapho lam elizayo ndiya kuxelela umfazi ukuba kubaluleke kakhulu kum, ndiza kuzama ukumbona njengomntu ochitha umvuzo wam ukuba akunjalo ondibanceda ukuba ndichithe.